I-SERP yanamhlanje: Ukujonga okubonakalayo kwiibhokisi zikaGoogle, amakhadi, iziqwengana ezityebileyo, kunye neepaneli | Martech Zone
NgoLwesithathu, Meyi 6, 2020 NgoLwesithathu, Meyi 6, 2020 Douglas Karr
Sele kuyiminyaka esibhozo ndityhalele abathengi bam faka iziqwengana ezityebileyo kwiivenkile zabo ezikwi-intanethi, kwiiwebhusayithi nakwiibhloko. Iziphumo zophendlo lwe-injini zamaphepha kuGoogle ziye zaba zezokuphila, zokuphefumla, ezinamandla, ezinamaphepha awenzelwe wena ukufumana ulwazi oludingayo… ubukhulu becala enkosi kwizinto ezibonakalayo abazenzileyo kwiphepha lesiphumo seinjini yokukhangela besebenzisa idatha eyakhiweyo enikezwe ngabapapashi.
Ezi zincedisi zibandakanya:
Iibhokisi zeempendulo ngqo ngeempendulo ezimfutshane, ezikhawulezileyo, uluhlu, ii-carousels, okanye iitafile ezinokuthi zibe nemifanekiso yokubakhulisa.
Iziqwenga ezityebileyo inikezwe ziiwebhusayithi ukukhulisa iziphumo zokungena kwephepha elinamaxabiso, ukulinganisa, ukubakho, njl.
Amakhadi aTyebileyo kubasebenzisi abasebenziseka lula beselfowuni.
Iigrafu zoLwazi kwicala lasekunene le-SERP ebonelela ngemifanekiso eqingqiweyo kunye nolwazi malunga nokhangelo.
Iiphaneli zoLwazi kwicala lasekunene le-SERP ebonelela ngemifanekiso eqingqiweyo, ulwazi, iimephu kunye nemikhombandlela ekhethekileyo kuhlobo okanye kwishishini.
IPakethe yaseKhaya (okanye Ipakethe yeMephu) zintliziyo zeziphumo zophendlo lwasekhaya ezinolwazi lweshishini, uphononongo kunye neemephu. Oku kuqhutywa ikakhulu ngumsebenzi kaGoogle kuShishino lwam ngohlaziyo kunye nophononongo lophawu.
Abantu Babuza kwakhona Nika imibuzo ehambelana neempendulo kwimibuzo.
Iphakheji yemifanekiso yicarousel ethe tye kwimibuzo ejolise kwimbonakalo.
Amakhonkco eSiza Uluhlu olwandisiweyo lwamakhonkco aphambili kwiindawo ezithandwayo. Inokubandakanya indawo yokukhangela indawo ethe ngqo kwinkqubo yangaphakathi yokukhangela.
Twitter I-carousel ibonisa uluhlu lweetweets zamva nje ezivela kwiiakhawunti ze-twitter.
Ibhokisi yeendaba lixesha elibukhali leendaba zokuphula iindaba kunye namabali aphezulu afumaneka kwiindawo zeendaba ezaziwayo.
Ngokwenza idatha yakho kunye nokulandela imigangatho ye-Schema, uphawu lunokuchaphazela ukubonakala kwabo kwezi zinto zibandakanyekayo kwiphepha lesiphumo se-injini yokukhangela-ngakumbi xa kufikwa ekuphuculeni iziphumo zabo ezidwelisiweyo kwiphepha usebenzisa iziqwengana ezityebileyo.
Kukho impikiswano engathandekiyo koku… noGoogle uyakwazi gcina abasebenzisi kwiphepha labo lesiphumo seinjini yokukhangela kunokuba ubazise kumaphepha akho okuya. Ukuba banako ukugcina abasebenzisi phaya, banokubanakho ukucofa iintengiso, isonka sikaGoogle kunye nebhotolo. Kodwa ke… uGoogle ungumnini wabaphendli, ndisoyika ukuba kufuneka udlale umdlalo wabo. Ngethemba, njengoko uqhuba iziphumo zeinjini yokukhangela kwindawo yakho, wenza umsebenzi omkhulu ekubandakanyeni nasekuthabatheni ulwazi lwendwendwe lwakho ukuze wakhe ubudlelwane obuthe ngqo.
UGoogle akathethi kuphela ukuba ukubonelela ngedatha ye-meta kunokubangela ukuba kuboniswe ngokufanelekileyo kwi-SERP, bachaze ngokupheleleyo ukuba izityebi ezityebileyo zinokuphucula ukubonakala kweinjini yokukhangela kuba ifundisa ii-algorithms zazo kulwazi olukwiphepha.
Ukuba inkampani yakho, abathengisi bakho, kunye nomxholo wakho abayisebenzisi oonomadudwane abatyebileyo, Uya kushiyeka kubumdaka okhuphisana nabo abenzayo. Ukuba iarhente yakho yentengiso ayikungxoli kuwe ukuze uyenze- kuya kufuneka ufumane ifemi entsha. Kwaye ukuba unesibonelelo sokudibanisa okanye esidala esingabaxhasiyo, kuya kufuneka ufuduke okanye uphuhlise isisombululo esenzayo. Izityebi ezityebileyo aziphuculi ukukhangela kuphela, zikwachaphazela amaxabiso okucofa ngaphezulu kunanini na ngaphambili.
Le infographic evela eBrafton, Isikhokelo esiBonakalayo kuwo onke amaNqaku eGoogle SERP: ii-Snippets, iiPaneli, iiNtengiso ezihlawulelweyo kunye nokunye okuninzi, inikeza ukujonga ngokubanzi indlela ezityebile ngayo iziqwengana kunye nedatha eyakhiwe ngendlela ejongeka ngayo kwiphepha leziphumo zeinjini yokukhangela.
tags: imicodataiifomati ezincincioonomadudwane abatyebileyoschemeischema markupiphepha lesiphumo seinjini yokukhangelainyokakwindonga yesitalato yezitalatowsj
Mar 19, 2012 ngo-9: 25 AM
Njengomthetho andingomlandeli omkhulu we-infographics, kodwa ndifanele ndithi le yenziwe kakuhle kwaye yenza umsebenzi obalaseleyo wokucacisa iziqwengana ezityebileyo- ngakumbi malunga nendlela eziyiphucula ngayo iCTR kunye noguqulo.
Mar 19, 2012 ngo 12:47 PM
Ndivunyiwe, Jeff! Benza umsebenzi omkhulu.